China 15kV 200A Rotatable Feedthru Insert စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Anhuang
15kV 200A Rotatable Feedthru ထည့်သွင်းပါ
Anhuang သည် Rotatable Feedthru Insert တွင်အထူးပြုထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့် Rotatable Feedthru Insert ကိုထောက်ပံ့ပေးပါသည်။ ထုတ်ကုန်သည် IEEE Standard 386 ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပြီးပြိုင်ဘက်၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်နိုင်သည်။
15kV 200A Rotatable feedthrough ထည့်သွင်းထားသည့်အရာများသည်ပေါင်းစပ်ထားသည့် loadbreak ဘုရ်ှနှင့်အတူတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးနိုင်ရန်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတွင်းထဲသို့ကောင်းစွာချည်ထားသည်။ ဘုရ်ှတွင်းထည့်သွင်းခြင်းများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကွင်းပြင်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်အစားထိုးခြင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိစေသည်Bushing ထည့်သွင်းs နှင့်တံတောင်ဆစ် connectors အားလုံးဝန်ကိုချိုးဆက်သွယ်မှု၏မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်။ ဘုရ်ှထိုးသွင်းထည့်သွင်းမှုသည်ထည့်သွင်းမှုအတွင်း၌လက်ရှိလွှဲပြောင်းမှုတစ်ခုတည်းသာပါ ၀ င်သောမူပိုင်ခွင့်လုံးလုံးလျားလျားလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုသည်။ ရှုပ်ထွေးသောလက်ရှိလမ်းကြောင်း၏ဒီဇိုင်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိစေသည်။
Internal Broach သည် torque ထိန်းချုပ်ထားသောတပ်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။ ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ထားသော torque tool ကို အသုံးပြု၍ ချုံပုတ်တွင်းကိုမတော်တဆကျိုးပဲ့သွားမည်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ Bushing တွင်းထဲသို့စနစ်တကျတင်းကျပ်စွာထားနိုင်သည်။ ဘုရ်ှ၏ကော်လာ၏ ၀ င်ရိုးပေါ်၌တည်ရှိပြီးပါဝါပါ ၀ င်မှုသီးသန့် Latch ညွှန်ပြသည့်လက်စွပ်သည်ဘုရ်ှတွင်းထည့်သွင်းမှု၏ဝန်ကိုချိုးဖျက်သည့်တံတောင်ဆစ်တပ်ဆင်ခြင်း၏မှန်းဆမှုကိုဖယ်ရှားပေးသည်။
အလှည့်ကျသောအစာထည့်သွင်းမှုအရည်အသွေးကိုအရည်အသွေးမြင့်ဆာလ်ဖာဖြင့်ကုသသော Semi conduction EPDM ရာဘာဖြင့်အသုံးပြုသည်။ နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်တွဲဖက်ပါကချုံပုတ်ထည့်ခြင်းသည်ဝန်ချိုးချိုးခြင်းအတွက်အပြည့်အဝအကာအကွယ် ပေး၍ ရေမြှပ်နိုင်သောဆက်သွယ်မှုကိုပေးသည်။
1.INSULATION: အရည်အသွေးမြင့်မားပြီး peroxide-cured EPDM ရော်ဘာကိုဖော်စပ်၊ တည့်တည့်နှင့်ပုံသွင်းထားသည့်အတွင်းခံနှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်သောကွင်းဆင်းစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်။
2.LATCH အညွှန်းကိန်း: မှို -in ကိုတောက်ပသောအဝါရောင်လက်စွပ်အရည်အသွေးဆက်သွယ်မှုကိုအာမခံခြင်းအားဖြင့်တံတောင်ဆစ်တပ်ဆင်ခြင်းမှန်းဆဖယ်ရှားပစ်။
3. Semi-conductive Shield: အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော EPDM ရော်ဘာများသည်အကာအကွယ်သေသေသပ်သပ်ရှိသည့်ရှေ့မျက်နှာပြင်ကိုအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့အား grounding ဖြစ်စေသည်။
4. ဆက်သွယ်မှုရရှိသူ - ပစ္စတင်အဆက်အသွယ်မှလက်ရှိတွင်းတူးခြင်းသို့ကြေးနီအစိတ်အပိုင်းလွှဲပြောင်းပေးသည်။
5.THREADED BASE: 3/8” -16 UNC ကြေးနီချည်များသည်တွင်းတူးခြင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
6.HEX BROACH: 5/16” hex broach သည် torque tool နှင့်တသမတ်တည်းတပ်ဆင်မှုကိုခွင့်ပြုသည်။
မျက်လုံး 7.GROUNDING - သေလွန်သောရှေ့မျက်နှာစာဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်မြေပြင်ဝါယာကြိုးတပ်ဆင်ရန်အတွက် Semi- conductive shield သို့ပုံသွင်းထားသော tabs သုံးခု။
8.ARC SNUFFER စည်းဝေး - Arc-ablative ပလပ်စတစ်သည် load breaking switching လုပ်စဉ်အတွင်း arc extinguishing gas ကိုထုတ်လုပ်သည်။
ဖော်ပြချက်ရည်ညွှန်းအမှတ် operating voltage ဗို့အားလက်ရှိလည်ပတ်မှု
ဘုရ်ှထိုးထည့်ပါ AH STT-15/200 15kV 200A
9. Semi-conductive Shield INSERT: အရည်အသွေးမြင့်သော EPDM ရာဘာသည်စက်မှုစွမ်းအားနှင့်ယူနီဖောင်းလျှပ်စစ်ကာကွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
ဖော်ပြချက် အကိုးအကားအမှတ် လည်ပတ်မှုဗို့အား operating အမည်ခံလက်ရှိ
ဘုရ်ှထည့်သွင်း feedthru 200A 15kV AH STT-15/200 15kV 200A
ရှေ့သို့ 24kV 200A Rotatable Feedthru ထည့်သွင်းပါ
နောက်တစ်ခု: 24kV 200A ဘုရှ် Insert
Bushing ထည့်သွင်း 15kv 200a
ဘုရှ် Insert 24kv 200a
200k Rotatable Feedthru ထည့်သွင်းပါ
တံတောင်ဆစ် 15kV 200A
15kV 200A တိုးချဲ့ထားသော Insulin Loadbreak Bushing ...
Bush ထည့်သွင်း 15kV 200A